12 Toerana mahafinaritra hitsidihana an'i Russia | Save A Train
Home > Train Travel Russia > 12 Toerana mahafinaritra hitsidihana an'i Russia
Nandeha lamasinina, Train Travel Russia
(Last Nohavaozina: 29/06/2021)
Manerana an'i taiberita siberia, ny farihy Baikal taloha indrindra, Kamchatka dia hatrany Moskoa, ireo 12 Ny toerana mahatalanjona hitsidika an'i Russia dia hiala aina. Safidio fotsiny ny fomba fitetezanao, fonosana fonon-tànana mafana na palitao mafana amin'ny toetr'andro sarotra, ary araho izahay mankany Russia.
1. Tendrombohitra Altai
Eo anelanelan'i Russia, Mongolia, Shina, ary ny faritra Kazakhstan Altai no misy an'io 700 farihy, ala, ary ny tampon'ny Siberia avo indrindra amin'ny Mt Belushka, amin'ny 4506 M. Altai dia zara raha misy mponina, ka ho hitanao fa tsy voakasiky ny sivilizasiôna maoderina izany, ary ny natiora sy ny fiainana dia ihany no hiarahaba anao.
Ankoatry ny, raha mpitsangatsangana ianao, avy eo dia fitsangatsanganana any amin'ireo 1499 glaciers ao Altai no hahagaga anao. Ary, Ny rafting amin'ny renirano Katun lehibe indrindra sy ny reniranon'i Biya dia traikefa nahafinaritra. Etsy ankilany, safariam-biby dia mety ho safidy mampiadana kokoa. Mety hanana fotoana tsy fahita firy hihaonana amin'ny leoparda misy lanezy ianao, pygarga, sakadia, ary mihoatra ny 300 karazana vorona. Tsy isalasalana, Altai dia iray amin'ireo tsara indrindra toeran'ireo biby any Eropa ary toerana mahavariana hitsidihana an'i Russia.
Kazan dia lanitra maritrano ao amin'ny Repoblika Tatarstan, Russia andrefana. Ny afovoan'ny tontolon'ny Tatar dia miorina eo amoron'ny Volga, sy ny reniranon'i Kazanka, ary noheverina ho tanàna fahadimy lehibe indrindra any Russia.
Araka ny voalaza etsy ambony, ny rafitr'ireo tranokala lehibe Kazan dia hahasarika ny masonao amin'ny loko sy ny endriny fotsy sy manga. Ohatra, Kazan Kremlin, tranonkala lova manerantany, Moskea Kul Sharif, Katedraly Epifania, vitsivitsy amin'ireo toerana azonao tsidihina hianaranao bebe kokoa momba ny kolontsaina Tatar.
3. Toerana mahafinaritra hitsidihana an'i Russia: Farihin'i Baïkal
Ilay farihy tranainy indrindra amin'ny tantaran'izao tontolo izao, Niforona ny Farihin'i Baikal 25 tapitrisa taona lasa izay. Ny hatsiakany sy ny velarany midadasika dia mahatonga ny Farihin'i Baikal ho lasa ririnina any Siberia, ary amin'ny fahavaratra, afaka mitsambikina any amin'ny rano madio any Eropa ianao, na mizaha ny bibidia mahalana indrindra eto an-tany.
Fitsangantsanganana an-tsambo, mankafy ny dian'ny Baikal mandeha an-tongotra, na manana barbecue eny amoron'ny farihy mahavariana indrindra any Russia, hanana traikefa nahafinaritra ianao. Ireo hazo kesika manodidina, Taiga sy efitra dia a fiaran-dalamby nankany avy amin'ny tanàna akaiky indrindra Irkutsk, toerana iray hafa mahaliana hitsidika an'i Russia. Ambonin'izany rehetra izany, azonao atao ny manomboka ny dia ataonao Baikal avy any Shina na Russia, amin'ny alàlan'ny lamasinina Trans-Siberia, fahavaratra na ririnina.
Ny tanànan'i Tsars sy ireo lapa malaza, Nanentana poeta sy mpanoratra i Saint Petersburg. Raha mbola tsy nankany Saint Petersburg ianao, mbola tsy nahita an'i Russia ianao, satria ity tanàna ity dia iray amin'ireo sary masina malaza sy manaitra an'i Russia.
Ny Hermesy, Lapan'i Catherine, ny lapa ririnina, sy zaridainan'i Peterhof, mahatalanjona fotsiny. Ny dingana rehetra ataonao dia hisarika anao hanakaiky kokoa ny angano Rosiana ary hisoratra ao aminao. Ny tantaran'i Saint-Petersburg sy ny maritrano dia mahatonga azy io ho toerana tsy maintsy hitsidihana an'i Russia ary mazava ho azy fa iray amin'ny tampony 12 toerana mahatalanjona indrindra any Russia.
bibidia, be, tsara tarehy, ary mahagaga, Kamchatka dia miandry anao saika amin'ny faran'izao tontolo izao. Ny saikinosy Kamchatka dia eo atsinanan'i Russia, trano saika 300 volkano, mazoto ny ankamaroany, ary ny fomba fijery mahavariana indrindra momba ny Oseana Pasifika sy ny tany efitra Rosiana. Vitsy dia vitsy no mahalala ny fahagagana nataon'i Kamchatka, Ka Kamchatka no toerana mahafinaritra sy mahavariana indrindra hitsidihana an'i Russia.
Ho hitanao fa tsy mora ny manatratra ny zava-mahatalanjon'i Kamchatka, noho ny toerana lavitra azy. Na izany aza, rehefa manao ianao, ho gaga anao ny natiora primal, fahagagana voajanahary: ny loharano mafana, renirano, bibidia, ary mazava ho azy volkano. A fitsangatsanganana volkano dia iray amin'ireo zavatra tafahoatra indrindra sy mampihetsi-po indrindra hatao any Kamchatka. Ohatra, Klyuchevskaya Sopka no tampon'ny tendrombohitra avo indrindra sy volkano mihetsika, toerana irina ho an'ireo mpandeha maro ao Kamchatka.
6. Toerana mahafinaritra hitsidihana an'i Russia: Sochi
Eo amin'ny moron'ny Ranomasina Mainty, voahodidin'ny tendrombohitra sy toeram-pialofana maintso, Sochi no toerana fialantsasatra farany fahavaratra any Russia. Be mpitia i Sochi ka mahasarika ny tanàna 4 olona an-tapitrisany isan-taona, ho an'ny fialantsasatra fahavaratra amoron-dranomasina.
Ankoatry ny filentehan'ny masoandro, The Sochi Arboretum, na Italia kely, dia mety tsara amin'ny fomba fijery lehibe an'ny Ranomasina Mainty sy Sochi, ary mirenireny eny an-jaridaina mankafy ny vorombola.
Hamaranana, tsy misy toerana tsara kokoa hanaovana fialantsasatra miala sasatra, amin'ny fomba Russia, Rosia noho ny any Sochi. Ary noho izany, tsy mahagaga raha afaka mandeha any Sochi ianao avy any Mosko sy ny toerana rehetra any Russia, ary koa avy any Azia Afovoany sy Eoropa Atsinanana, lamasinina.
Veliky Novgorod dia manana toerana hajaina ao amin'ny anay 12 toerana mahatalanjona indrindra hitsidika an'i Russia. Azonao atao ny milaza fa ilay Novogrod lehibe dia toerana nahatongavan'i Rosia ho firenena lehibe ankehitriny. Miverina amin'ny 9 taonjato, Veliky Novogrod no toerana nisy ny Prince Rurik, in 862 nanambara ny fanjakana maoderina rosiana ary nahatonga an'i Novogrod ho ivon'ny varotra, demokrasia, ary ny fahaizana mamaky teny sy manoratra eo amin'i Russia sy i Balkan.
Noho izany, raha miditra amin'ny tantaran'ny Rosiana ianao, Veliky Novogrod dia tokony ho ao anaty lisitry ny siny. Ny trano mimanda Novogrod Kremlin, Katedraly St.. Marina i Sophia 2 amin'ireo tranokala tsy maintsy hita any Veliky Novogrod izay hahagaga anao. Mijoro ho an'ny 800 taona, eritrereto fotsiny ireo tantara sy hetsika nitranga teto.
8. Toerana mahafinaritra hitsidihana an'i Russia: Nosy Olkhon
Goavana be ny Farihin'i Baikal, fa tsy maintsy manampy toerana mahatalanjona iray tokony hotsidihinay izahay rehefa any Russia. Nosy Olkhon no nosy lehibe indrindra amin'ny Farihy Baikal, mitovy habe amin'ny New York City. Ao amin'ilay nosy no ahitana ala mieritreritra, tontolo feno vato, ary ihany 150000 mponina, tsy toy ny New York City.
Na izany aza, Nosy Olkhon dia toerana iray malaza ho an'ireo mpandeha mankao amin'ny farihin'i Baikal. Midika izany fa amin'ny fahavaratra dia afaka tonga milomano ao anaty rano madio madio ianao ary milentika any amin'ny farihy lalina indrindra eto an-tany. Amin'ny ririnina, etsy ankilany, afaka mankafy ny farihy tranainy indrindra eto an-tany ianao, amin'ny akanjo ririnina, mangatsiaka sy tsara tarehy fotsy.
Ny nosy dia ferry iray miala an'i Sakhuyurta ary ny Buryat dia mino fa 1 an'ny andry shamanika miisa dimy manerantany. Raha ny tena izy, azonao atao ny mahita ireo vato shaman eo afovoan'ny nosy.
Raha eny amin'ny dia Trans-Siberia ianao, dia hijanona ao Irkutsk angamba ianao, renivohitra tsy ofisialin'i Siberia Atsinanana. 19fiangonana rosiana tamin'ny taonjato faha-, Trano hazo volontany sy miloko manga, Taiga siberianina, Irkutsk dia tanàna manan-tantara mahafinaritra.
Ary, Irkutsk dia toerana fanaovana sesitany ny olona ambony sy manam-pahaizana Rosiana maro tany Siberia, raha nanapa-kevitra ny fitondrana ankehitriny fa nanohitra fahefana izy ireo. Noho izany, Irkutsk sy Siberian taiga dia manasongadina sanganasa tononkalo sy haisoratra Rosiana maro. Na izany aza, ankehitriny Irkutsk dia tanàna tsara tarehy: andian-tsoratra 13 trano hazo tamin'ny taonjato faha-18, Fiangonan'ny Mpamonjy, ary ny Bronshteyn Gallery dia toerana vitsivitsy tokony hotsidihinao.
10. Toerana mahafinaritra hitsidihana an'i Russia: Fiarovana voajanahary Stolby
Eo amoron'ny reniranon'i Yenisei, Ny valan-javaboary Stolby dia eo atsimon'ny tanànan'i Krasnoyarsk. Ny tahiry dia tsy latsa-danja amin'ny hatsaran-tarehy ambony 5 tahiry voajanahary tsara tarehy indrindra any Eropa. Taorian'ny dia lavitra tamin'ny fiaran-dalamby Trans-Siberia namakivaky an'i Russia, ho hitanao fa ny mandehandeha manodidina ny tahiry dia mampiakatra ny fanahinao hanaitra ny vatana sy fanahy matory.
Stolby dia manana 5 làlana lehibe mitondra kaody miloko, ka tsy ho very ianao amin'ireo làlana kely kely any an'ala. Vantany vao tonga any anaty ala ianao, ho hitanao ny niandohan'ny anaran'ilay tahiry. Misy 100 stolby - andry vato vato, Vovon-kazo mahavariana sy lava eo afovoan'ny hazo.
Ny fitsidihana an'io zaridaina natiora mahafinaritra io dia ny mankafy ny tsara indrindra amin'ny natiora. Tsy misy toa ny fofona sy ny fomba fijerin'ny ala rosiana, amin'ny fahavaratra na ririnina. Na izany aza, raha mikasa ny hanao ririnina ianao dia fampahatsiahivana haingana ny fanaovana sosona maro, satria lasa mangatsiaka be sy lanezy i Siberia.
Arbat miloko, Kremlin sy ny Kianja Mena, St. Katedraly Basil, sy ny reniranon'i Moskva, endri-javatra isaky ny karatra paositra, sary, ary ny momba an'i Moskoa. Na izany aza, mandra-pandehananao tongotra amin'ireo tranonkala mahatalanjona ireo, fa tena ankafizinao ny fahalehibiazany sy ny hakanton'izy ireo. Tsy misy fanontaniana momba ny hatsaran-tarehy mahafatifaty ao Moskoa. Noho izany, tsy mahagaga raha anisan'ny ny renivohitra 12 toerana mahatalanjona indrindra hitsidika an'i Russia.
Raha mahatalanjona i Moskoa, ny tanànan'ny metro any ambanin'ny tany dia tsara tarehy mitovy amin'izany. Tanàna iray fitsangatsanganana an-tongotra any ambanin'ny tany any Moskoa dia iray amin'ireo zavatra tsara indrindra hatao any Moskoa. Eto, hahazo fampahalalana marobe momba ny kanto ianao, famolavolana, sy ny tantaran'ny gara rehetra, ary koa ny tanàna, avy any an-toerana.
12. Toerana mahafinaritra hitsidihana an'i Russia: Nosy Kizhi
Fiangonana hazo, tilikambo famantaranandro iray octagonal hazo tanteraka, mandrafitra ny Kizhi Pogost tokana. Ity mpandrafitra hazo tsy manam-paharoa ity dia nataon'ny mpandrafitra, amin'ny iray amin'ireo nosy any amin'ny Lake Onega. Ho gaga ianao hahafantatra fa io karazana maodely io dia nalaza tamin'ny andro taloha. Ireo toerana hazo ireo dia toerana paroasy malaza tamin'ny taonjato faha-16, ary angamba aloha.
Na dia tsy fahita firy aza ny fiangonana any Russia, fiangonana hazo dia. Ny nosy Kizhi dia ohatra mahafinaritra an'ny artista rosiana. Nosy Kizhi dia Lova Iraisam-pirenena UNESCO toerana, ary iray amin'ireo fahagagana eran'izao tontolo izao, toy ny fitambaran-trano rehetra, mifanaraka tsara amin'ny tontolo voajanahary.
eto amin'ny Save A Train, faly izahay manampy anao amin'ny fikasana dia tsy hay hadinoina amin'ireto 12 toerana mahatalanjona any Russia amin'ny lamasinina.
Te hampiditra ny bilaoginay “ve ianao 12 Toerana mahafinaritra hitsidihana an'i Russia ”ao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Famazing-places-visit-russia%2F - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#Rosia	AmazingRussia	Fiangonana	LakeBaikalrussia	Moscow	Mostbeautyplacesinrussia	SaintPeterburg	Siberia	TranSiberiantrain	TravelRussia	VisitRussia